Imfazwe ebandayo ye-Intel Hack Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
INTEL Ifowuni yeDuty Ops emnyama: Imfazwe ebandayo
I-BO Imfazwe ebandayo ekugqibeleni inokusondela njengesigebenga sokwenyani sisebenzisa i-INTEL!
Ngaba ufuna ukuziva amandla e-COD Black Ops yethu: Imfazwe ebandayo iyazenzela ngokwakho? Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Sukunciphisa umda ngexesha ekufuneka ulisebenzisile ukukopela kwethu! Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje!
Olu khetho luza kusetyenziswa kuphela ngabagculi abazinikeleyo. Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
I-BO Cold War yenye yezona zinto zidumileyo zikhutshelwa umnxeba esakha sazibona, kwaye kwaba sengqiqweni ukuphuhlisa i-INTEL Cold War Hack yethu yokutshatisa ne-hype. Ukufikelela ekukhohliseni okuza kutshintsha umhlaba wakho!
Ifowuni yeDuty Ops emnyama: Imfazwe ebandayo Ulwazi lwe-INTEL
Abadlali beDuty Call baya kukonwabela kakhulu esi sixhobo, njengoko zonke izinto ekufuneka uzilawule kubachasi bakho ziya kubakho apha. Ngobuninzi beempawu ezibonakalayo (ezinje ngeSitha / i-ESP yobuhlobo, umgama weTshaba, kunye nokuKhangela okubonakalayo), uya kuhlala uyazi apho zikhona iintshaba kwaye uya kuba nakho ukuziphatha ngendlela ongathanda ngayo!
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo i-Intel Aimbot ayinangqondo, kwaye inokusetyenziswa nangubani na - awunyanzelekanga ukuba ube ligqala elinamava lehacks ukuze uqonde inkqubo apha. I-GamePron iya kubeka amava akho omsebenzisi ngaphambi kwayo nayiphi na into, yiyo loo nto iziphumo zihlala zibalasele!
Intel cpu kuphela(Ifuna ukwenziwa kwe-Bios kuvunyelwe !!!)
Ukufumana ukufikelela kuzo zonke iimpawu ezimangalisayo ezinikezelwa kwi-Black Ops Intel Hack! Ukusuka kwi-Aimbot ethembekileyo ezantsi ukuya eludongeni, esi sixhobo siza kukunika ukufikelela kuyo nantoni na. Ungazikhathazi ngazo zonke ezo zinto zinqongopheleyo kwiCOD Cold War Hacks!
Imibala ye-esp enemibala yeeThambo
Malunga neMfazwe ebandayo i-Intel
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo i-Intel isisombululo (kodwa esithembekileyo) esisisisombululo kubo bonke abalandeli bethu beFown of Duty phaya. Ukuqhatha kungaphakathi, kwaye kunokusetyenziswa ngelixa usasaza ngenxa yokhetho lwe "Streamproof"! Njengoko igama beliza kuphakamisa, i-CPU ekukuphela kwayo exhaswa kolu khetho iya kuba yi-Intel (kwaye kuya kufuneka ubenakho ukusebenza kwi-BIOS yakho!). Ukudlala umdlalo kwimowudi eskrinini esipheleleyo ngelixa usebenzisa lo mnqamlezo ngokuthe tye, nto leyo abanye abaphuhlisi abathanda ukuyikhawulela.
Kutheni usebenzisa iMfazwe ebandayo i-Intel ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Kutheni le nto ungazukubeka ukholo lwakho kumboneleli onokuthenjwa hacks kwi-Intanethi? Umdlalo wePron uyayiqonda into efunwa ngumsebenzisi kwizixhobo zabo, yiyo loo nto sikwazi ukuhambisa ngokungaguquguqukiyo- abanye ababoneleli bazakusokola ukunceda abathengi babo, njengoko konke abaxhalabileyo kukuzama ukukhululwa kwabo okulandelayo . Yonke i-Call of Duty Black Ops yethu: IiMfazwe eziBandayo ziya kuphathwa ngononophelo kunye nomgangatho engqondweni, kuba kuphela kwendlela yokufumana uninzi lweehacks / izixhobo zakho!
Imenyu yethu yomdlalo inesinye sezona zizathu zaziwayo zokuba kutheni abantu befuna iinkonzo zethu. Ukuba nesakhono sokwenza utshintsho kubhabho kubalulekile njenge-hacker, ngakumbi xa udlala umnxeba weDuty Black Ops: Imfazwe ebandayo. Imidlalo emitsha ihlala inikezela ngokhuphiswano oluqinileyo, kodwa ungasebenzisa i-COD Black Ops yethu: Imfazwe ebandayo i-Intel Hack yokubaleka! Nokuba uzakunyathela abadlali bakarhulumente okanye uthathe imidlalo yabucala, ukusebenzisa imenyu yomdlalo weqonga kuya kuphumelela umoya.
Umbuzo 7. Ngaba ukukopela kuyasebenza kwimowudi yeWarzone?
A7. Le mveliso isebenza kwiMultiplayer kunye neZombi. HAYI WARZONE.
Ngaba ufuna ukuziva amandla e-COD yethu emnyama ye-Ops: I-Col War War iyazenzela ngokwakho? Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Nokuba udiniwe kukuthembela kwiirandi ukukunceda uphume, okanye ufuna nje ukubona ukuba kunjani "kwelinye icala", ukusebenzisa i-INTEL Cold War Cheat iya kukunceda uphumelele ngeendlela ezininzi kunenye.
Ilindelwe Lawula kunye ne-COD BO Cold War INTEL Hack?